Maraykanka Iyo Xulafadiisa Oo Duqeymo Ka Bilaabay Suuriya Iyo Ruushka Oo Daawanaya | Berberatoday.com
Maraykanka Iyo Xulafadiisa Oo Duqeymo Ka Bilaabay Suuriya Iyo Ruushka Oo Daawanaya
Suuriya(Berberatoday.com)-Dalalka Mareykanka, Fransiiska iyo Britain ayaa duqeymo ay kaga jawaabayaan sunta la sheegay in dowladda Suuriya ay adeegsatay ka fuliyay gudaha dalka Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay weerarka, waxaana Trump uu intaa raaciyay in Mareykanka iyo xulafadiisu ay hore ugu diyaar garoobeen ficil ka dhan ah dowladda Suuriya, si loo joojiyo hubka kiimikada ee la sheegay inay Dadka u adeegsatay.
Trump waxaa kale oo uu eedeeyay dowladda Ruushka oo uu sheegay inay ku guul-dareysatay inay ka soo baxdo ballankii ay qaaday sannadkii 2013-ka, kaasi oo ahaa inay burburiso hubka kiimikada ee Suuriya.
Ra’iisal wasaaraha Britain Theresa May oo iyaduna ka hadashay weerarka ayaa sheegtay in weerarada ay ka fuliyeen gudaha dalka Suuriya ay ahaayeen kuwa qorsheysnaa oo loogu talo galay in ayna sii hurinin xiisadda gobolka, waxaana ay intaa ku dartay inay iska ilaaliyeen wax walba oo waxyeelayn kara dadka rayidka ah ee reer Suuriya.
Dawladda Ruushka oo taageerta Madaxweynaha Suuriya iyo Xukuumaddiisa isla-markaana Ciidamo ka joogaan Suuriya, ayaan wax jawaab milletari ah ka bixinin Duqaymaha Dawladaha Maraykanka, Faransiiska iyo Ingiriisku ka bilaabeen Suuriya.